Fanafihana “grossiste” teny Ankadindramamy : Lasa ny vola 11 tapitrisa ariary -
AccueilSongandinaFanafihana “grossiste” teny Ankadindramamy : Lasa ny vola 11 tapitrisa ariary
Fanafihana “grossiste” teny Ankadindramamy : Lasa ny vola 11 tapitrisa ariary
31/12/2018 admintriatra Songandina 0
Jiolahy miisa efatra nitam-piadiana, indray no nandroba” grossiste » amoron-dalana iray teny Ankadindramamy, ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 5 ora hariva tany ho any. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny lelavola 11 tapitrisa Ariary, miampy finday avo lenta. Ankoatra ity lasibatra, olona niantsena iray no naratra noho ny nafitsok’ireto olon-dratsy.
Araka ny nambaran’ny polisim-pirenena, dia jiolahy nilanja basy PA no niditra an-terisetra tao nanao ny fanafihana tao amin’ity mpamongady enta-madinika, mivarotra zava-pisotro ity, izay heverina fa efa nahafantatra mialoha ny toerana hotafiany. Raha ny angom-baovao voaray avy amin’ny kaomiseran’ny polisy miadidy ny boriborintany fahatelo, nanapoaka basy avy hatrany ireto jiolahy vao tafiditra tao anatin’ny tsena, ka olona iray no naratra. Nambanana basy ny tompon’ny fivarotana. Noraofin’izy ireo avy hatrany izay hitany, ka tamin’izany no nahalasan’ny vola, ary nentina tamin’ny alalan’ny harona plastika. Mbola be olona ihany teny an-toerana saingy nitampify noho ny fampihorohoroana no sady tsy nisy nahasahy niantso vonjy nandritry ny fisehoan-javatra, hoy ihany ny fanazavana azo.
Vetivety teo amin’ny dimy minitra ihany no faharetan’ny fandrobana nataon’ny jiolahy dia azony ny vola ary lasa nandeha nirifatra izy ireo ary mbola nanapoaka basy indroa. Nisy ny olona nahatsikaritra ny fisehoan-javatra ka nampandre ny mpitandro filaminana, saingy efa tara ny fahatongavan’ireo polisy. Tonga nametraka fitoriana taorian’ny fandrobana nihatra taminy ireo tompon’ny fivarotana nitantara ny fahavoazany. Manoloana izany dia efa mandray an-tanana ny raharaha ihany koa ny polisy misahana ny ady heloka bevava. Tokony ho mailo ny rehetra, satria fotoana mampirongatra ny asan-jiolahy ny andro fety tahaka izao. Santionanany ity teny Ankadindramamy ity, raha toa ka efa maro no naharenesam-baovao momba izany teto andrenivohitra na andro io na alina. Anisan’ny mampihorohoro ny olona tanteraka ny fanan’ny olon-dratsy basy, izay tena mahery vaika tokoa izany raha ireo hita mandritra ny fanafihana teto amintsika.
film streaming dans Fanisam – bahoaka-HATOMBOKA ETO ANALAMANGA SY ANDROY
Shirley Pettengill dans Tsy nahomby teto Antananarivo-HAMBOLY KORONTANA ANY MAHAJANGA NY MLE
Mora manadino ve, sa izay mihitsy no fomban’ny mpanao politika sasantsasany eto amintsika? Nanaitra ny sain’ny mpanara-baovao mantsy ny resaka nifanaovan’ny RFI sy Andry Rajoelina, nivoaka ny faha-7 oktobra 2018, ka nilazan’ity “putschiste” ity ny ...Tohiny
Fihaonan’ny mpamatsy vola : Efa firenena milamina ho an’ny fampiasam-bola i Madagasikara
Andramena tratra tany Singapour : Mpandraharaha malagasy arahi-maso akaiky
casper servis ankara: https://moments-in-the-sun.tumblr.com/
Shelley Mainwaring: https://myseoblogv7.wordpress.com/